Jaakadaha qaboojiyaha lo Dharka qolalka qabow • Dawaarka kumbuyuutarka P&M
Jaakadaha qaboojiyaha la xaqiijiyay
Qalabka shaqaalaha gudaha Jaakadaha qaboojiyaha tayo sare leh, aamin ah, oo heegan u ah ka shaqeynta heerkulka hoose waa arrin aad muhiim ugu ah loo shaqeeyayaasha. Doorashada qaabka saxda ah ayaa ah caqabadgaar ahaan haddii alaabadaas aan si joogto ah loo dalban.
Dukaankayaga, waxaan ku siineynaa moodooyinka ugu fiican tayada ka soo saarayaasha lagu kalsoonaan karo ee ku lug leh soo saarista dhar gaar ah.
Hi-Glo 25 Qaboojiyaha qaboojiyaha ilaalinta ilaalinta jaakadda ilaa -64,2 ° C
Jaakadaha qaboojiyaha Moodooyinkan waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan, waxa iyaga ka soocaya waa naqshadeynta, qiimaha iyo ujeeddada. Ujeedada gaarka ah ee tolasho ahaan darteed, qalab tayo sare leh ayaa la isticmaalay oo dhameystir sax ah ayaa la isticmaalay.
Waxaas oo dhan si adag loo ilaaliyo shaqaalaha oo loo adeego sannado badan. Mid ka mid ah moodooyinka ugu caansan waa Jaakada Hi-Glo 25 Coldstore oo bixisa ilaalin ilaa -64,2 ° C (sawirka), oo ku qalabaysan nidaam casri ah, 5-lakab ah, oo loogu talagalay in lagu daboolo lakabyo badan oo hawo ah.
Jaakada la sheegay waxay la kulantaa heerka EN342, taas oo ka dhigaysa mid suurtagal ka dhigaysa in loogu isticmaalo bakhaarada oo leh heerkul gaadhaya -64,2 ° C. Si kastaba ha noqotee, nooca jaakada aan bixinno, ee inta badan ilaaliya, wuxuu ilaaliyaa xaaladaha shaqada illaa -83,3 ° C 1 saac oo dhaqdhaqaaq dhexdhexaad ah, iyo hoos -44,01 ° C 8 saacadood oo leh dhaqdhaqaaq dhexdhexaad ah.
Qiimayaashani waxay khuseeyaan haddii jaakada iyo surwaal Hi-Glo 40 dungarees wada xiran yihiin.
Jaakada qaboojiyaha CS-10 qaboojiyaha, ilaalinta ilaa -25 darajo C.
Amni ku filan
Soosaarayaashayagu waxay diirada saareen tayada ugu fiican iyo dhamaadka saxda ah. Dharka u hoggaansamaya heerka EN 342 wuxuu siiyaa difaac aad u fiican heerkulka aadka u hooseeya. Hawlgallada jawiga qabow waxaa lagu gartaa heerkul u dhigma ama ka hooseeya -5 ℃. Waa muhiim inaadan u oggolaan dharka inay qoyaan - qoyaan ama daadad ayaa leh cawaaqib xumo.
Jaakadaha qaboojiyaha ee laga heli karo cabbirro kala duwan waxay ka dhigan tahay inaad si fudud u heli karto dhar kugu habboon adiga. Iibsiga dharka adag waa maalgashi faa'iido leh. Ka dib soo-jeedinta soo-saaraha, waxay u adeegi doontaa ujeeddada sanado badan, taas oo ay xaqiijiyeen milkiilayaasha shirkadaha waaweyn iyo isticmaaleyaasha laftoodu.
Jaakada qaboojiyaha Allegroallegro kutrka qaboojiyahajaakadaJaakada qabowjaakad heerkulka hooseeyaJaakada Hi-Glo - 40 darajojaakad difaac ahjaakad milicsiga qolalka qabowJaakad dahaarka kululayntajaakad la xaqiijiyayJaakadaha qaboojiyahaJaakadaha qaboojiyaha